मानुङकोट र बन्दीपुरमा पर्यटकको चहलपहल – Highlights Tourism
19 hours ago एमाले महाधिवेशनले जगाएको चितवनका पर्यटन व्यवसायीको आशा
2 days ago पाथीभरा पदमार्गमा भरिया सुविधा
2 days ago पर्यटक पर्खँदै रोमाञ्चक लभ्लीहिल
3 days ago बसन्तपुरको तले दरबार पुनःनिर्माण अवरुद्ध
3 days ago कञ्चनजङ्घाको आधार शिविर जाने पदर्मागमा ‘स्नो पोल’
5 days ago अष्ट्रेलियाले डिसेम्बर १ देखि पूर्ण खोप लगाएकालाई प्रवेश अनुमति दिने
5 days ago मध्यपुरमा रात्रिकालीन सम्पदा पदयात्राको आकर्षण
5 days ago यस्तो बन्दै छ पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल
5 days ago आगलागीबाट लेकसाइडका पाँच पसल क्षति
6 days ago पर्यटन दूत बन्न योगगुरु रामदेवलाई पर्यटनमन्त्रीको आग्रह
6 days ago योगगुरु रामदेव र बालकृष्ण चन्द्रागिरि डाँडामा
1 week ago नेपाल–बङ्गलादेशबीच पर्यटन प्रवर्द्धन छलफल
2 weeks ago पोखराका प्रमुख गन्तव्य घुम्न ‘साइटसिन बस’
2 weeks ago इन्धनको मुल्यबृद्धिसँगै हवाई भाडा बढ्यो
2 weeks ago चहलपहल बढ्दै छ भक्तपुरका पर्यटकीय स्थलहरुमा
2 weeks ago चन्द्रागिरि रिसोर्टलाई ‘इन्टरनेशनल हस्पिटालिटी एण्ड ट्राभल अवार्ड’
2 weeks ago मोटरसाइकल ‘ट्रेक’ को ‘हब’ बन्दै डोल्पा
2 weeks ago मानुङकोटमा पहिलो होटल
3 weeks ago चरा पर्यटनमा कोरोनाको असर
4 weeks ago अरुणडाँडामा शिव र बुद्धको मूर्ति
4 weeks ago बन्दीपुरका होटल तथा रेष्टुराँको स्तरीकरण
मानुङकोट र बन्दीपुरमा पर्यटकको चहलपहल
फाइल फोटो: तनहुँको व्यास नगरपालिका–५ स्थित पर्यटकीय गन्तव्य मानहुँकोटमा शनिबार आन्तरिक पर्यटक । बन्दाबन्दी खुकुलो भएसँगै मानहुँकोटमा आन्तरिक पर्यटकको चहलपहल शुरु भएको छ । तस्बिर : कृष्ण न्यौपाने/रासस
दमौली । कोरोनाका कारण सुस्ताएको तनहुँको पर्यटन पुनः पुरानै स्थितिमा आउन थालेको छ । लामो समयसम्म कोरोना सङ्क्रमणका कारण सुस्ताएको जिल्लाको पर्यटनले विस्तारै गति लिन थालेको हो । कोरोना सङ्क्रमण न्यूनीकरण भएर जनजीवन सामान्य बन्न थालकाले जिल्लाका पर्यटकीय स्थानमा पर्यटकको चहलपहल बढ्न थालेको छ । यसबाट व्यवसायीहरू पनि आशावादी हुनथालेका छन् ।
अहिलेको याममा बिहानको सूर्योदयसँगै कुहिराले ढाकिएको दृश्य हेर्न आन्तरिक पर्यटक व्यास नगरपालिका–५ मानुङकोट उक्लिन थालेका देखिन्छन् । पछिल्लो केही दिनयता दैनिक सयौंको सङ्ख्यामा पर्यटक मानुङकोट पुग्ने गरेको वडाध्यक्ष मोहनकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । “बिहानको सूर्योदय र कुहिराले ढाकिएको दमौलीको दृश्य अवलोकनका साथै दिउँसोका समयमा हिमशृङ्खला हेर्न पनि पर्यटकको आगमन बढेको छ”, उनले भने, “राति बास बस्नेको सङ्ख्या पनि उत्तिकै छ ।”
गत वर्षदेखि मानुङकोटमा आन्तरिक पर्यटकको आगमन ह्वात्तै बढेको हो । गत वर्षको कात्तिकमा एकैदिन १० हजारभन्दा बढी पर्यटक यहाँ आइपुगेका थिए । दमौली बजारले कुहिराको घुम्टो ओढेर सूर्य उदाउँदाको दृश्य हेर्न लालायीत आन्तरिक पर्यटक मानुङकोट पुग्ने गरेका छन् । “अहिले दसैँपछि मानुङकोटमा पर्यटकको चहलपहल बढेको छ”, स्थानीय व्यवसायी रेवती आलेले भने, “पर्यटक बढेसँगै यहाँको व्यवसाय पनि बढेको छ ।” मानुङकोटमा आन्तरिक पर्यटकको चाप बढ्न थालेपछि गत वर्षदेखि स्थानीयवासीले प्रत्येक घरमा होटल खोलिसकेका छन् ।
यहाँबाट धौलागिरि, माछापुच्छ्रे, अन्नपूर्ण, मनास्लु, लमजुङ हिमाल अवलोकन गर्न सकिन्छ । साथै दमौली बजारलगायत आसपासका क्षेत्र पनि छर्लङ्ग देखिन्छ । मानुङकोट जाने बाटो कालोपत्रसमेत हुन थालेकोे छ । केही ठाउँमा कालोपत्र भइसकेको छ भने केही ठाउँमा गर्न बाँकी छ ।
जिल्लाको अर्को पर्यटकीय नगरी बन्दीपुरमा पनि यतिबेला पर्यटकको चहलपहल बढेको छ । दसैँ बिदापछि आन्तरिक पर्यटकको चहलपहल बढेपछि यहाँका व्यवसायी उत्साहित भएका छन् । कोरोनाका कारण दुई वर्षदेखि पर्यटक ठप्प भएको बन्दीपुरमा अहिले आन्तरिक पर्यटक वृद्धि भएको बन्दीपुर पर्यटन विकास समितिका सचिव वसन्त पौडेलले जानकारी दिए ।
फाइल फोटो : बन्दिपुर ।
सुस्ताएको यहाँका होटल व्यवसायीमा अहिले आशा पलाएको उनले बताए । “दुई वर्ष यहाँको व्यवसाय ठप्प रह्यो, अहिले पर्यटकको चहलपहलले आशा जगाएको छ”, सचिव पौडेलले भने, “यो क्रम निरन्तर रहे व्यवसायीलाई राहत हुन्छ ।”
होटल दरबार हिमालयका सञ्चालक वैश गुरुङले स्वदेशी पाहुनाको आगमन बढेसँगै व्यवसायीमा आशा जगाएको बताए । अधिकांशले कोरोनाविरुद्धको खोप लगाएका कारण पनि घुम्न निस्किएका हुनसक्ने उनको भनाइ थियो ।
बन्दीपुरका होटल व्यवसायीले छुट प्याकेजसमेत ल्याउने तयारी गरेका छन् । बन्दीपुर पर्यटन विकास समितिका अध्यक्ष किसान प्रधानका अनुसार पर्यटकलाई आकर्षित गर्न छुट प्याकेज ल्याउने तयारी छ । यहाँ होटल सङ्घसँग आबद्ध साना ठूला गरी ७७ होटल सञ्चालनमा छन् । बन्दीपुरमा ग्रिनपार्क, होटल दरबार हिमालय फेवा, गामघर, बोल्डइन, बन्दीपुर माउण्टेन रिसोर्ट, बन्दीपुर प्यालेस, मगर भिजेललगायत होटल सञ्चालित छ ।
यसैगरी म्याग्दे गाउँपालिका–२ स्थित ज्यानटाङ सामुदायिक वनमा रुखमाथि निर्माण गरिएको घरमा पनि पर्यटकको चहलपहल बढेको छ । यहाँ दैनिक १०० भन्दाबढी आन्तरिक पर्यटक आउने गरेको सामुदायिक वनका अध्यक्ष ईश्वर रानाभाटले जानकारी दिए ।
भिमाद नगरपालिका–९ मोहोरियास्थित अग्लो ढुङ्गामा पनि आन्तरिक पर्यटकको चहलपहल बढिरहेको छ । अग्लो ढुङ्गा सिङ्गारेर उद्यान बनाइएपछि यस ठाउँ आन्तरिक पर्यटकको रोजाइमा परेको स्थानीयवासी शिवकुमार आलेले बताए । घाङ्च ल्हुम भनेको मगर भाषामा अग्लो ढुङ्गा हो । मोहोरियाको जङ्गलमा अग्ला ढुङ्गा परापूर्वकालदेखि नै थिए । झट्ट हेर्दा आकर्षक देखिने चुच्चे अग्ला ढुङ्गा ढुङ्गामै सीमित थिए । अहिले तिनै ढुङ्गालाई सिङ्गारेर उद्यान बनाइएको छ ।
Previous article जाने होइन त रामपुरको छाङ्दी झरना?
Next article ‘प्याराग्लाइडिङ’ बन्यो आकर्षण
More By highlightsnep
मानुङकोटमा पहिलो होटल
बन्दीपुरका होटल तथा रेष्टुराँको स्तरीकरण
आन्तरिक पर्यटकले भरिभराउ बन्दिपुर
एमाले महाधिवेशनले जगाएको चितवनका पर्यटन व्यवसायीको आशा
पाथीभरा पदमार्गमा भरिया सुविधा
पर्यटक पर्खँदै रोमाञ्चक लभ्लीहिल
बसन्तपुरको तले दरबार पुनःनिर्माण अवरुद्ध
नारायण अधिकारी चितवन । कोरोनाबाट पूर्णरूपमा प्रभावित बनेको यहाँको पर्यटन व्यवसायलाई नेकपा …
नारायण अधिकारी चितवन । कोरोनाबाट पूर्णरूपमा प्रभावित बनेको यहाँको पर्यटन व्यवसायलाई नेकपा (एमाले)को १०औँ …
कञ्चनजङ्घाको आधार शिविर जाने पदर्मागमा ‘स्नो पोल’
खासुरः एउटा खुला जीवित सङ्ग्रहालय
होमस्टेले पुनर्जागरण : भादामा थारु स‌ंस्कृति
च्छो रोल्पाः पदयात्राको उत्कृष्ट गन्तव्य
नेपाल क्लाइम्बिङ्ग स्पोर्ट एसोसिएसनमा नयाँ कार्यसमिति
गुरुङ सम्पदा पदयात्राः किन जाने क्होलसोंथर ?
सम्पादक : खिम घले